Samsung Galaxy Watch: famaritana, vidiny ary famoahana | Androidsis
Ny hetsika fampisehoana izay nokarakarain'i Samsung dia nahatonga antsika hanana vaovao marobe. Iray amin'ireo vokatra izay Ny marika koreana androany dia nanolotra ny Galaxy Watch. Ity no andiany vaovao amin'ny famantaranandro marani-tsaina, izay miaraka amin'ny fanovana lehibe. Ny orinasa dia nanova ny anarany, ary mamela antsika vaovao amin'ny resaka famaritana.
Miaraka amin'ity taranaka vaovao ity dia natao batemy ho Galaxy Watch, manantena ny orinasa fa hisy vokatra tsara kokoa amin'ny tsenan'ny akanjo anaovana, iray amin'ireo tsena mitombo haingana indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ary miaraka amin'ity maodely vaovao ity dia afaka manome zavatra betsaka horesahina izy ireo.
Mahita kinova maromaro amin'ny famantaranandro azo alaina. Hatramin'ny orinasa manome modely amin'ny habe samihafa, izay ahitsy amin'ny haben'ny tanan'ny mpakafy. Ary koa, arakaraka ny habeny, misy fiovana sasany amin'ny famaritana ny famantaranandro. Lazainay anao bebe kokoa etsy ambany.
1 Famaritana Samsung Galaxy Watch
1.1 Fijerena Galaxy 46mm
1.2 Fijerena Galaxy 42mm
2 Araho ny fampihetseham-batana
Famaritana Samsung Galaxy Watch
Misy habe roa samy hafa ny fitambarany, izay ahitsy amin'ny mpampiasa tsirairay, miankina amin'ny haben'ny tanany sy ny tsirony. Ny famaritana manan-danja indrindra dia mitovy, na dia nanisy fanovana ny maodely tsirairay aza i Samsung. Fanomezana isan-karazany an'io karazana io.
Fijerena Galaxy 46mm
Manomboka amin'ny maodely lehibe indrindra rehetra izahay. Izy io dia famantaranandro 46mm savaivony, natao ho an'ireo mitady famantaranandro lehibe kokoa, misy efijery lehibe kokoa. Ny tena mampiavaka azy dia:
Display: 1.3-inch boribory Super AMOLED miaraka amina vahaolana 360 × 360 px, fiarovana Corning Gorilla DX + ary loko miloko mandrakariva
Rafitra miasa: OS Tizen
bateria: 472 mAh miaraka amin'ny famahana finday
Habeny feno: 46 x 49 x 13 mm
lanja: 63 grama
Tady azo takalo 22mm miloko isan-karazany: Onyx Black, Deep Navy Blue, Basalt Grey
Fijerena Galaxy 42mm
Io no maodely kely indrindra amin'ireo roa ireo izay natolotry ny orinasa Koreana tamin'ny hetsika fampisehoana nataony. Habeny malina somary malina kokoa, lehibe kokoa noho ny ankamaroan'ny famantaranandron'ny olona eny an-tsena (mba hanomezana anao hevitra ny savaivony) ary misy loko roa izy io. Ireto ny fepetra arahana amin'ny maodely 42mm:
Display: 1,2-inch boribory Super AMOLED misy famaritana 360 × 360 px, fiarovana Corning Gorilla DX + ary loko miloko mandrakariva
Rafitra fandidiana: OS Tizen
bateria: 270 mAh miaraka amin'ny famahana herinaratra
lafiny: 41.9 x 45.7 x 12.7 mm
lanja: 49 grama
Tady azo takalo 20 mm misy amin'ny loko isan-karazany: Onyx Black, Lunar Grey, Terracotta Red, Lime Yellow, Cosmo Violet, Pink, Beige, Cloud Grey, Brown
Loko famantaranandro: Volamena mena na mainty.
Samsung dia nisafidy ny fanovana tamin'ity famantaranandro vaovao ity. Ny orinasa dia manohy miloka amin'ny Tizen amin'ny maha rafitra fiasa azy, taorian'ny fifindrany mety ho amin'ny Wear OS dia re tato ho ato. Mahita processeur vaovao izahay, nohatsaraina hanomezana hery bebe kokoa ho an'ny famantaranandronao.
Ankoatra izany, ny bateria dia teboka lehibe ao amin'ireo Galaxy Watch. Hatramin'ny Samsung, amin'ny batterie iray dia manana bateria mandritra ny herinandro ianao. Ny maodely 42mm dia tombanana ho 45 ora fampiasana ary 120 ora nahena ny fampiasana. Ho an'ny 46mm, ny tarehimarika dia 80 ora ampiasaina ary 168 ora fampihenana ny fampiasana (7 andro).
Ireo modely roa ireo dia mety hitranga amin'ny fampiasana ny famandrihana Wireless. Ny charger tsy misy tariby dia efa tafiditra ao anaty boaty fiambenana ho an'ireo mpampiasa liana amin'ny fampiasana io asa io. Fomba tsara andoavana ny findainao mandritra ny minitra vitsy. Ho fanampin'izay, ireo liana dia afaka mividy Wireless Charging Duo, izay mamela ny famahanana telefaona finday sy famataranandro miaraka amin'izay.
Araho ny fampihetseham-batana
Iray amin'ireo lafiny tena ilaina amin'ny Galaxy Watch vaovao ny fisiana lehibe sy zava-dehibe omen'ny Samsung Health. Hatramin'ny fanaraha-maso tsara sy marina kokoa ny fampihetseham-batana an'ny mpampiasa dia ho tanterahina. Fampandrenesana sy fanatsarana vaovao no ampidirina, izay hanome fahafaha-manao bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa manao famantaranandro rehefa manao spaoro.
Amin'ny lafiny iray, mampiditra azy io fanohanana fanazaran-tena vaovao 21. Ho fanampin'izay, hanaraka tanteraka ny fampiofanana 39. Hanome antsika ny fahafahana manova ny fanaonao sy manamboatra endrika isan-karazany izany. Ny zavatra rehetra mifanaraka amin'ny asantsika isan'andro.
Zava-baovao iray hafa tonga amin'ny Galaxy Watch ny fitantanana ny adin-tsaina. Ampidirina ny monitor iray izay hahitana raha manana fihenjanana avo lenta isika. Raha izany dia hanome sosokevitra fampihetseham-po izay hanampy antsika hiala sasatra izy, ary ny ankamaroan'ny rivotra mifoka rivotra. Samsung dia manatsara ny fanaraha-maso torimaso amin'ny famantaranandrony.
Izahay koa mahita fanatsarana eo amin'ny sehatry ny sakafo isika. Haseho amintsika ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny kaloria laninay, afaka mampakatra sary amin'ny Bixby amin'ny telefaona. Rehefa mampakatra ny sary ianao dia hiseho amin'ny famantaranandro ny isan'ny kaloria ao amin'io sakafo io.
Araka ny hitantsika, hitantsika fa hisy loko sy habe marobe amin'ity Galaxy Watch ity. Hatramin'ny 24 Aogositra dia hanana ny fahafaha-mitahiry ny safidy tianay ny ankamaroan'ny famantaranandro Samsung vaovao isika. Ny famoahana ofisialy azy dia kasaina hatao amin'ny 7 septambra. Noho izany dia mila miandry iray volana ianao mandra-pahatongan'ny fomba ofisialy eo amin'ny tsena.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana ny vidiny ao Spain isika. Ny vidiny any Etazonia dia fantatra, izay Ho 330 $ ho an'ny kely ary 350 $ ho an'ny lehibe. Amin'ny fanovana dia 285 sy 302 euro izy ireo, saingy azo inoana fa lafo kokoa izany rehefa apetraka amin'ny fomba ofisialy eo amin'ny tsena any Espana.
Noho izany, hitodika any amin'ny vaovao marobe tonga avy any Samsung izahay momba ny fanombohana ny famantaranandro vaovao any Espana. Tokoa, amin'ny tapaky ny volana dia efa manana ny vidiny ofisialy isika amin'ireo maodely roa eto amin'ny firenentsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Samsung Galaxy Watch: Ny fanavaozana ny famantaranandro Samsung
YI Home Camera Family Pack 2 amin'ny 1 famerenana
Fortnite dia manokatra fisoratana anarana beta ho an'ny fitaovana Android isan-karazany. Fantaro hoe iza amin'ireo no mifanaraka!